आहार, केसँग के खाने के नखाने! | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← `गैर आवासीय नेपाली तारा कतार २०११` को तयारी
गिनिज बुकमा नाम लेखाउने तयारीमा राजेश पायल राई →
आहार, केसँग के खाने के नखाने!
Posted on 04/08/2011 by राजु गुरुङ्ग | टिप्पणी छोड्नुहोस्
– डा. प्रतिमा आचार्य
हजुरबा, हजुरआमाले माछा, मासु खाएपछि दूध नपिउनु वा कटहर खाएपछि पोलेको मकै नखानू भनेको हामीमध्ये धेरैले अनुभव गरेकै हुनुपर्छ । त्यसो भन्नुका पछाडि वैज्ञानिक कारण रहेका छन् । आयुर्वेद विज्ञानले ‘विरुद्ध आहार’ सेवन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानेको छ । जुन खाद्यपदार्थ सँगै खाँदा शरीरलाई हानि गर्दछ, त्यो ‘विरुद्ध आहार’ हो । यस्ता विरुद्ध आहारको नियमित सेवन शरीरलाई विष समान हुन्छ । आखिर हाम्रो खाना कसरी शरीर विरुद्ध हुन पग्छन् त ?
खाना मानिसका लागि अत्यन्त जरूरी छ तर तरिका पुर्‍याएर खाना खानु अझ बढी महत्वपूर्ण छ । ठिक तरिकाबाट खाना खानु स्वास्थ्यका लागि जति हितकर हुन्छ, बेठिक तरिकाबाट खाना खानु स्वास्थ्यका लागि त्यत्ति नै अहितकर हुन्छ । हामीले खाने खानामा पाइने गुणहरूको समानता वा असमानताले, संस्कारले, संयोगले, कस्तो ठाउँमा फलेको हो वा कुन समयमा फलेको हो वा पकाएको वा खाएको हो, त्यसले खानालाई विरुद्ध बनाउँछ । त्यस्ता विरुद्ध आहारलाई त्याग्नु नै राम्रो हुन्छ । यहाँ यस्तै केही विरुद्ध आहारका ’boutमा केही चर्चा गरिएको छ ।
माछा र दूध सँगै खाँदा गुण विरुद्ध हुन्छ । किनकि यी दुवै खानाका गुण असमान रहेका छन् । माछा उष्णता बढाउने हुन्छ भने दूध शीतलता बढाउने हुन्छ । यी दुईको परस्पर प्रयोग गर्दा शरीरमा रहेका स-साना नलीलाई अवरोध गर्दछन् ।
दूध र गहतलाई सँगै प्रयोग गर्नु हुँदैन । किनकि दूध मधुर रसवाला र शीतयुक्त हुन्छ भने गहत अम्लरसयुक्त र उष्ण वीर्ययुक्त हुन्छ । यी पनि परस्परमा गुण विरुद्ध हुन्छन् ।
गुड वा मह र मूलाको प्रयोग सँगै गर्नु संयोग विरुद्ध हुन्छ । यिनीहरू संयुक्त रूपमा खाँदा शरीरलाई हानि पुर्‍याउँछ ।
दहीलाई तताए खानु संस्कार विरुद्ध हो । ’cause दहीलाई तताएपछि त्यसमा विद्यमान गुण नष्ट भई दही हानिकारक हुनपुग्छ ।
रातमा सातु खानु समयविरुद्ध हुन्छ । ’cause रातमा शीतलता बढेको हुन्छ र सातु पनि शीतलता र रूक्षता बढाउने खालको हुन्छ ।
चिसो वातावरण हुने ठाउँमा चिसो, चिल्लो खानाको प्रयोग देश विरुद्ध हुन्छ ।
समान मात्रामा मह र घ्युको प्रयोग गर्नु मात्रा विरुद्ध हुन्छ । असमान मात्रामा भने मह र घ्युको प्रयोग प्रयोग विरुद्ध हुँदैन ।
दूध र कटहरको सँगै प्रयोग पनि विरुद्ध हुन्छ । यी दुवैमा समान गुण भएकाले विरुद्ध हुन्छ ।
सातु खानुभन्दा पहिला र पछि पानी पिउनु पनि विरुद्ध हुन्छ ।
सस्र्युंको तेलमा पकाइएको मासु संस्कार विरुद्ध हुन्छ ।
नुन र दूध मिसाएर खाँदा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ ।
खिर खाइसकेपछि सात्तु खानु पनि सही होइन ।
गर्मीबाट पीडित मान्छेले महको सेवन गर्नु पनि सही होइन ।
खिचडी र दूधलाई सँगसँगै खानाले वान्ता तथा पखाला हुनसक्छ
विरुद्ध आहारको असर
विरोधी गुण भएका फलहरूलाई दूधसँग सेवन गर्दा बहिरो, अन्धो मात्र होइन, मृत्युसम्मको सम्भावना पनि छ । विरुद्ध आहारको नियमित प्रयोगले अन्धोपना, नपुंसकता, जण्डिस, श्वेतकुष्ठ, पिनास, सन्तान-दोष, स्मरण शक्तिको नाश, बुद्धिको क्षय, श्रवण शक्तिमा ह्रास, पाइल्स आदि हुनसक्छ । तसर्थ विरुद्ध आहार प्रयोग नगर्नु नै उचित होइन र ?